C/llaahi Goodax Barre oo goor dhow ku guuleystay kursiga Aqalka Hoose | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta C/llaahi Goodax Barre oo goor dhow ku guuleystay kursiga Aqalka Hoose
Doorashadan oo ahaa mid ay hareysay khilaaf iyo muran ka dhashay ergooyinka, iyadoo Madaxweynaha Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble uu taageerayay Musharax C/llaahi Goodax Barre, taasoo keentay in Guddiga iyo Madaxweynaha iska hor-yimaadaan.
C/llaahi Goodax Barre ayaa wareeg labaad ku soo baxay, kaddib doorasho adag oo aad la isugu dhowaa wareegii koowaad. Waxana uu ku guleystey codad gaaraya 32 cod halka Bile Xasan oo la tartamayay uu ka helay 18 cod, waxaana xumaaday hal cod.
Dabaal dega guusha C/llaahi Goodax Barre ayaa ka bilaabatay magaalada Beledweyn, iyadoo rasaas cirka loo ridayo, Sidoo kale waxaa rasaas u muuqatay dabaaldeg ay rideen ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee xarunta doorashada ka dhacaysay ee magaalada Jowhar.
Guusha Goodax uu gaaray ayaa ah mid caqabad ku noqon karta Madaxtooyada, maadaama uu aad uga soo horjeedo Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale Wasiirka Kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Maxamed Cumar Ceemooy ayaa ku guuleystey doorashada Aqalka Hoose kadib markii uu helay codad gaaraya 26cod, halka ay Farxiyo Maxamuud Dhaqane ay ka heshay 43 cod mid kamid ah kuraasta beesha Udeejeen. Dahabo Suusow ayaa sidoo kale ku guuleysatay kursiga beesha Shiidle kadib marki ay heshay 27 cod.